Hayi wonke Slavic umfazi ngu-lucky yayo personal ubomi ekhaya, kodwa oku akuthethi ukuba kufuneka nihlale emva kwaye ukumelana kunye loneliness. Ngenxa ungasoloko ukufumana indlela ukuze ndonwabe, kodwa kufuneka kwenza iinzame ukuyenza. Elungileyo isisombululo izakuba ukuba cinga malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ka-ubambe uthotho iintlanganiso kunye nabantu abahlala ngaphesheya. Aseyurophu kwaye e-United kingdom, abaninzi abameli ye-stronger ngesondo phupha ka-marrying umfazi abo kuyafana na Slavic imbonakalo. Baya ixabiso hayi kuphela wangaphandle data, kodwa kanjalo ngokunyaniseka, ububele kwaye thrift, nako ukuhlangabezana ilungelo ixesha mzuzu ukunika phezulu iqabane lakho, kuncama yakho career. Kulula ukuba ahlangane umntu kuba ezinzima budlelwane kwi-site ukuze inikezela le nkonzo. Ukuba ufuna ukwenza okulungileyo portfolio kwi icebo kunye phezulu traffic, unga hlenga-hlengisa i-ezinzima intlanganiso kunye otyebileyo abantu. Kodwa zabo ingqalelo yi-focused kwi nani, kufuneka balandele ingqalelo iphepha lemibuzo malunga. Zininzi imigaqo ukuba unako ukunceda wena ukutsala European abantu.
Kumele elungileyo umgangatho, preferably ngaphandle retouching, kwaye kwangoko groom singafunda. Umele ukufumana iifoto apho ufaka ndonwabe kwaye smiling, abanye kubo kufuneka kuba epheleleyo ukukhula. Iifoto ukukhonza ngeenjongo ezahlukeneyo ukuphepha ndinovelwano ukuba ufuna nje ukusebenza okanye relaxing zonke unyaka macala onke. Bamele bonisa elahlukileyo icala ubomi bakho. Yi-shicilela iifoto kwi swimsuit okanye nangakumbi ngaphandle kwayo, kungcono ukuba kuncama, ngokunjalo a ezinzima intlanganiso kunye abavela kumazwe angaphandle amadoda asingawo ebonakalayo. Kunjalo, kuya kubakho abaninzi imiyalezo, kodwa inkoliso yabo iya kuba obscene. Ngaphezu koko, awuyi ngokubhekiselele yokuba Europeans musa kunikela umtshato. Kuba ezinzima intlanganiso kunye abantu ukuba ngxi wathabatha indawo, uza kuba ukubhala kancinane malunga ngokwakho. Maze kuthi ukuba ungummi dibanisa umntu olilungu musani ukoyika ka iingxaki. Kufuneka ukubhala malunga yakho uluhlu lwezinto, khondo lobungcali-mfundo lilonke, umsebenzi, kwaye imisetyenzana yokuzonwabisa. Okubhaliweyo kufuneka umdla kwaye kulula ukubhala, preferably kwi-nyulu isingesi. Ukuba unayo kuhlangatyezwana nazo kunye otyebileyo abantu kuba ezinzima budlelwane, kubaluleke kakhulu kukwazi ukugcina unxibelelwano. Kuyimfuneko ukubonisa enokwenzeka umyeni othe eyiyeyakhe phupha – kubalulekile eyiyeyakhe ubomi iqabane – ukwenza usapho, kwaye ingabi kuphela ngaphesheya, ukubonisa ubumi, kwaye sele kukho into eza end phezulu. Simele sizame ukufumana ukwazi umntu sisebenzisa uthetha ngcono, ngoko ke kufuneka ibe anomdla zabo kwendlela qualities, hayi ubungakanani bag.
Imibuzo enjalo ingaba absolutely kuyimfuneko
ngabo ezingafanelekanga, ngoko ke ngu-hayi kufanelekileyo ukuba buza kwabo. Xa enokwenzeka umhlobo iqala ebonisa zabo ingeniso, kufuneka ibe walumkisa, nje otyebileyo Europeans zange kuziphatha ngoluhlobo. Ukuqala ubudlelwane kunye a European, musa kuba reckless, ngenxa kaninzi abantu ukusuka ngaphesheya ingaba amanyathelo afanelekileyo, isebenziseke isicwangciso ubomi babo kuba nokuza eminyaka. Ngenxa yesi sizathu, kuyimfuneko ukuba abe ezinzima kwaye noko ngokunxulumene umntu ongelilo frivolous. Kubalulekile ukukhumbula ukuba otyebileyo abantu bamele kakhulu suspicious. Baya musa ufuna ukuba abe ridiculed, ngoko ke baya umbuzo zonke iinkcukacha. Yiyo kuwe shouldn ukuba ukuxoka to wear a”action”. Ngokukhawuleza okanye kamva, konke oku kuya kunabela ngokukhawuleza okanye kamva, ngomhla ephikisana, siya kufuneka banike impression ukuba ungummi enyanisekileyo umntu olilungu elinovakalelo ukuba umntu othile enomsila. Kodwa kubalulekile kananjalo hayi kukunceda kakhulu ke kakhulu ukuza kuthi ga ngoku, kanye njengokuba umntu abe bacinga ukuba yena ngu rude kwaye ukulungele ukuvula kuqala ukuza kwakhe. Akuvumelekanga elicetyiswayo ukwakha i-iron elonyuliweyo kwaye a feminist ngomhla wakhe ngabakhe. Aseyurophu, kukho ngokwaneleyo enjalo abafazi, kungcono ukubonisa ngokwakho modest, sweet, amatsha na ethe-ethe, ubufazi. Umntu kuvakala ngathi a knight abo kufuneka nokuphumelela intliziyo a beautiful elonyuliweyo. Musa unobuhle oku ithuba kwaye kuba ulingeka ukuba athimba ngayo. Ukuba ufuna enye indoda ukusuka Yurophu, kufuneka funda okungakumbi malunga mentality abantu ukuba ngaye lowo akhoyo. Oku kuza ngaphandle kwenu ukususela relentless amanyathelo kwaye zemali. Umzekelo, xa ubhala kwangaphambili kwisigrike okanye isispanish, Wena umngcipheko ukufumana impendulo ukuba uyakukukhokela Yakho ngokwembalelwano kwaye ngaphaya. Nge-Swedish kwaye isijamani, nangona kunjalo, trick akuthethi ukuba umsebenzi, impendulo kuyanqaphazekaarely, nkosi, ngenxa yokuba ucinga lokuqala inyathelo kufuneka ubudoda. Kanjalo ifuna ukwazi okungakumbi malunga imicimbi yayo kwaye inkolo apho kwezo meko umyeni sizibophelele. Uninzi kusenokwenzeka ukuba, baya kuba ukutshintsha zabo beliefs. Ukuba le nto elingamkelekanga kuwe, ngoko ke kufuneka oyikhethileyo malunga nationality kwaye inkolo ye-groom. Oko sele ukuba abe namanani kuba ukufunda ulwimi ukuba uyakwazi ukuthetha malunga yakho kwixesha elizayo mlingane, ngenye indlela ingxoxo kunye nabo emva umtshato uza kuba nzima
← Isijapani roulette ividiyo incoko
Webcam Brazil Ukuhamba online in real time, hlala ekhaya →